कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि अहिले नेपालमा लकडाउन जारी छ । कम्तिमा पनि ५ जेठसम्मको यो लकडाउनका कारण अहिले सडक तात्न पाएको छैन । लकडाउन हुँदैनथ्यो भने भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएकाले निकै धेरै युवाहरु सडकमा पुगिसकेका हुन्थे ।
लकडाउन नै भए पनि अब केही दिन यता काठमाडौं र विभिन्न ठाउँमा राँके जुलुस निकाल्न थालिएको छ, प्रदर्शनी हुन थालेको छ ।
एकातिर सडकमा मानिसहरु निस्किन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सामाजिक सन्जालमा भारतको विरोध चर्को रुपमा भइरहेको छ ।
अब यो विरोध विस्तारै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति पनि ट्विटरमा खनिन थालेको छ ।
पछिल्लो समय भारतले गरेको अतिक्रमणको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मुख खोलेका छैनन् । त्यसो त उनले र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि एक संयुक्त विज्ञप्ति पनि निकालेका थिए ।
यस विषयमा सामाजिक सन्जालमा भने केपी शर्मा ओली चुप नै छन्।
अब सोमबार साँझ ६ बजे ट्विटरमा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा प्रधानमन्त्रीको ट्विटरमा चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
प्रयोगकर्ताहरुले उनलाई देशको अलिक चिन्ता लिनु पर्ने र भारतीय नेता बिरामी पर्दैमा स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न हतार गर्न नहुने सल्लाह दिएका छन् ।
सुदीक्षा भुषाल नामबाट ट्विटर चलाउनले एक प्रयोगकर्ताले लेखेकी छिन्, ‘कति धेरै चिन्ता हो ? देशको पनि अलिअलि चिन्ता लिए हुन्थ्यो नि ! कालापानी र लिपुलेक भनेको के हो थाहा छ तपाईंलाई ?’
त्यस्तै अर्का प्रयोगकर्ता किशोर सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाफ फर्काएका छन्– भारतका प्रधानमन्त्रीसँग हजुरले बैठक बस्नको लागि दबाब दिनुपर्छ प्रधानमन्त्री ज्यू । तपाईं पछाडि हट्नु भयो भने हाम्रो विश्वास टुट्नेछ । हामी मरे तूल्य हुनेछौँ ।
बिदी सोल्टी नामबाट ट्विटर चलाउनेले लेखेका छन्– ए बुढा, तिम्लाई देशको भन्दा अर्काको देशको नागरिकको चिन्ता किन धेरै ?
यो सामाग्री तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्रीको यो ट््िवटमा १०४ रिट्विट आएको छ । अनि उनलाई मेन्सन गरिएका अधिकांश जवाफमा कालापनी र लिपुलेकबारे वा नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषयमा जवाफ दिन आग्रह गर्नेहरु निकै धेरै छन् ।
I have learnt that former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh has been hospitalized. I wish himaspeedy recovery.
— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) May 11, 2020